नयाँ सरकार कहिले ? यस्तो छ सरकारको तयारी – Online National Network
नयाँ सरकार कहिले ? यस्तो छ सरकारको तयारी
१३ मंसिर २०७४, बुधबार ०२:५२
काठमाडौँ, १३ मंसिर — संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सभा सरकार गठनको व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभाको जस्तै गरिएको छ । आगामी २१ मंसिरदेखि मतगणना सुरु भएमा समानुपातिकसहितको अन्तिम परिणाम आउन कम्तीमा तीन साता लाग्नेछ । १० पुससम्म अन्तिम नतिजा आएमा मध्य माघमा देशले नयाँ सरकार पाउनेछ ।
राजनीतिक विवादका कारण प्रदेशप्रमुख नियुुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था भनेको प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण उच्च अदालतका न्यायाधीशमार्फत गराउने विकल्प छ । त्यसका लागि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत व्यवस्था गर्न सक्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाको भनाइ छ । प्रदेश सभा बैठक आह्वान पनि न्यायाधीशमार्फत गर्न सकिने उनले बताए । – नयाँ पत्रिका दैनिक
उद्योग वाणिज्य महासंघमा ढकाल
देशभर २४ घण्टामा १३८०